wasiir xoosh oo kooram la aan baarlamanka kubadbaadey maanta – Balcad.com Teyteyleey
Kulankii Baarlamaanka maanta oo kooram la’aan u baaqday go’aan ka gaarista Xil heynta Wasiirka Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Xoosh Jibriil ayaa u baaqday kooram la’aan kadib markii ay inta badan xildhibaanada baarlamaanka ay soo xaadiri waayeen.
Baaqashada kulanka baarlamaanka maanta oo ahaa mid xasaasi ah ayna dadku u dheg taagayeen ayaa laga dareemayaa kala qeybsanaan ka dhex jirta xildhibaanada baarlamaanka.
Wasiirka Dastuurka ee dowlada federalka C/maan Xoosh Jibriil oo hore uga baaqsady in uu hortago xildhibaanada Baarlamaanka ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho mana jiro wax war ah oo ku saabsan aragtidiisa la xiriirta go’aan ka gaarista xil hayntiisa.
Xiisada ka dhex jirta baarlmaanka ee la xiriirta wasiirka dastuurka dowlada federalka ayaa keeni karta sabayn dhinaca siyaasada ah ee ka dhex abuurta dowlada iyo baarlamaanka,iyadoo xalay oo dhan laga dareemayay magaalada Muqdisho xiisad siyaasadeed.
Kulan shalay Guddiga Joogtada ku yeeshay Xarunta Golaha shacabka ayaa waxay isku raaceen in arrinta Wasiirka loo gudbiyo kulanka guud ee golaha shacabka, iyadoo illaa 10 ka mid ah xubnaha Guddiga Joogtada ay ogolaadeen in kiiska loo soo gudbiyay dib loogu celiyo Xildhibaanada, si ay go’aan uga gaaraan.
Wasiir Xoosh ayaa lagu heystaa inuu Baarlamaanka hor-tagi waayay, kaddib markii loo yeeray, waxaana uu horay uga hor yimid qaraarkii Xildhibaanada golaha shacabka ku laaleen go’aankii ka soo baxay Maxkamadda sare, kaasoo ahaa in dib loogu laabto doorashada 8 Xildhibaan.
Kulanka maanta ayaa lagu waday in go’aan ka gaarista ay noqon doonto aqlabiyada halka ay u codeeyaan, marka Guddoonka uu sharxo ajandaha in codka loo qaado Wasiirka uu miiska soo saaro, go’aanka ay u codeeyaan Xildhibaanada ay kala cadaan doonto sida uu sheegay Xildhibaan Dhalxa.
The post wasiir xoosh oo kooram la aan baarlamanka kubadbaadey maanta appeared first on Ilwareed Online.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Somaliland oo is casilay iyo Xildhibaanada oo aqbalay